ဒီလိုအဖြစ်အပျက်လေးဖြစ်သွားတယ်... သက်ဆိုင်သူမင်းသိရဲ့ လား... ~ MSU Portal
ဒီလိုအဖြစ်အပျက်လေးဖြစ်သွားတယ်... သက်ဆိုင်သူမင်းသိရဲ့ လား...
6/03/2013 02:34:00 AM Navi Kyaw No comments
၂၉.၅.၂၀၁၂... အချိန်ကညနေ ၃ နာရီ ၃၀ မိနစ်
ကျွန်တော်နဲ့နောက်အေဘီတစ်ယောက်..စက်ချုပ်အားလုံးသုံးယောက် ခရီးစဉ်ကရန်ကုန်လေဆိပ်ကနေ ဒူဘိုင်းလေဆိပ်ကိုသွားရမှာပါ ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်လေဆိပ် ကိုလေယာဉ်တစ်ဆင့် ဘန်ကောက်ကနေ သီရိလင်္ကာကိုလံဘိုလေဆိပ်ကိုလေယာဉ်တစ်ဆင့် ကိုလံဘိုလေဆိပ်ဟိုတယ်မှာတစ်ညအိပ် နောက်နေ့ညနေမှယူအေအီးနိုင်ငံ ဒူဘိုင်းလေဆိပ်ကိုလေယာဉ်ဆက်စီးရမှာပါ အတူသွားမယ့် စက်ချုပ်ကတော့လုပ်သက်ရင့်သူပီပီ မိသားစုကိုနှုတ်ဆက်ကာ ၃ နာရီမထိုးခင်ကတည်းက လေယာဉ်စီးရမယ့်ဂိတ်ဆီကိုဝင်သွားလေရဲ့  ကျွန်တော်တို့ သံပြားမနင်းဘူးတဲ့အေဘီနှစ်ယောက်ကတော့အခုမှ ပြောစရာစကားတွေပြောမကုန်အောင် မိသားစုနဲ့စကားတွေကောင်းကြတုန်း လူသစ်သင်္ဘောသားတွေအနေနဲ့လေဆိပ်ထဲဝင်ရင် အချိန်စောစောဝင်လေကောင်းလေဆိုတာ ကိုနောက်မှနောင်တရတယ် လေယာဉ်က ၄ နာရီခွဲထွက်မှာဆိုတော့အေးအေးဆေးဆေးစကားကောင်းတုန်း ဒါပေမယ့် ၃ နာရီခွဲလောက်မှာတော့ အထဲဝင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့နှစ်ယောက်သား ခရီးဆောင်အိတ်တွေသယ်ပြီးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ဖြတ် ရန်ကုန်ကသင်္ဘောကုမ္မဏီကလိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းအကုန်စီစဉ်ပေးလိုက်တာတောင် သက်ဆိုင်ရာလေကြောင်းလိုင်းကတာဝန်ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေက ဟိုစာရွက်လိုတယ်ဒီစာရွက်လိုတယ်နဲ့ ပြောနေတာကြောင့် အစိမ်းတစ်ကျပ်ပေးပြီး မိတ္တူဆွဲခိုင်းရပြန်ရော
အမှန်ဆိုရင် ရန်ကုန်ကကိုယ်ကိုပို့ပေးဖို့စီစဉ်တဲ့သင်္ဘောကုမ္မဏီက ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ယောက်ကလေယာဉ်ဂိတ်ပေါက်ဝအထိလိုက်ပို့သင့်တာပါ တစ်ခါမှမကြုံဖူးတဲ့သူတွေအတွက်ကစာရွက်စာတမ်းကိစ္စတွေအတွက် အချိန်တွေအရမ်းပေးရပါတယ် ကုမ္မဏီကိုလည်း သူတို့တောင်းသလောက်ရိုက်ကြေးလည်းပေးပြီးပြီ ကိုယ်တွေလူသစ်တွေဘက်ကစိတ်ကူးကလည်း လစာနည်းရင်နည်းပါစေ လုပ်သက်ရအရင်းကြေတော်ပြီဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ရွေးချယ်စရာမရှိကြိတ်မှိတ်လိုက်ကြရတဲ့သဘော လေယာဉ်တောင်မှနှစ်ဆင့်တည်းဆိုဈေးကြီးလို့ထင်ရဲ့  အခုတော့ သုံးဆင့်စီးရတဲ့ဈေးပေါတဲ့လေကြောင်းလိုင်းနဲ့သွားရတယ် ထားပါတော့ ဒီလိုနဲ့ပဲ ဂိတ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြတ်ကာလေဆိပ်အပေါ်ထပ်ကိုတက်လာခဲ့ပါတယ် အပေါ်ထပ်လှေကားထိပ်ရောက်တာနဲ့ လူဝင်မှု့ ကြီးကြပ်ရေးကောင်တာကိုစာရွက်စာတမ်းတွေပြရတာပေါ့လေ ကိုယ်တွေကလူသစ်ဆိုတော့ သင်္ဘောကုမ္မဏီရဲ့ အလုပ်ခန့်စာမှာရေးထားတဲ့ ရာထူးနဲ့ လုပ်သက်တစ်နှစ်မှမရှိတဲ့ သင်္ဘောသားလုပ်သက်မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာရေးထားတဲ့ ရာထူးကွဲလွဲနေတာလေးအဆင်ချောစေဖို့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်ထဲကို အစိမ်း ၁၀ တန်တစ်ရွက်ညှပ်လို့လ၀က အရာရှိရှေ့ ချပေးလိုက်ပါတယ် စစ်စရာရှိတာတွေစစ်အပြီးမှာ သူ့မျက်နှာကိုတစ်ချက်အကဲခတ်လိုက်တယ် တုံးထုပေးလိုက်တာက အိုကေ ဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့ စာအုပ်ကိုပြန်ယူတော့အစိမ်း ၁၀ တန်လေးမယူဘူးသဘောကောင်းတယ်ဆိုပြီးပျော်နေတာ စာအုပ်ဖွင့်လိုက်မှပဲ အထင်နဲ့အမြင်တက်တက်စင်အောင်လွဲရပါတော့တယ် မြန်လိုက်တဲ့လက်ဘယ်အချိန်ဘယ်လိုယူထားလိုက်မှန်းတောင်မသိလိုက် ဒါပေမယ့်ကိုယ့်အလုပ်သွားလမ်းလာလမ်းဖြောင့်ဖို့ ငွေလှူလိုက်တဲ့သဘောမို့ အဆင်ပြေဖို့သာအဓိက ကျွန်တော်တို့သင်္ဘောသားတွေအတွက်ကတော့ဒါတွေက အစဉ်အလာလိုဖြစ်နေပြီပဲတဲ့လေ
ဒီလိုနဲ့ပဲ လ၀ကကောင်တာကိုဖြတ်ပြီး လေယာဉ်စီးရမယ့်ဂိတ်နံပတ်ကိုမကြည့်ပဲ စစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ခုကိုထပ်ဖြတ်ကာ လေယာဉ်စီးရမယ့်ဂိတ်နံပတ်ကိုမကြည့်ပဲ ထပ်တွေ့တဲ့လေယာဉ်ဂိတ်ထဲ နှစ်ယောက်သားခပ်တည်တည်နဲ့ဝင်ထိုင်နေကြတယ် လေယာဉ်ထွက်ဖို့အချိန်ကလည်း ၂၅ မိနစ်လောက်လိုသေးတယ်ဆိုတော့အတူသွားမယ့်စက်ချုပ်ကို ရှာကြတယ် နှစ်ယောက်သားထိုင်နေတဲ့အခန်းအတွင်းမှာတော့လူကလက်ချိုးရေလို့ရလောက်အောင်ပဲရှိပါတယ် စက်ချုပ်ကိုရှာမတွေ့ကြပါဘူး တွေးကြတာကအပေါ်ထပ်က ကော်ဖီဆိုင်မှာပဲကော်ဖီသောက်နေလားပေါ့ လေယာဉ်ထွက်ဖို့ကလဲ ၁၅ မိနစ်ပဲလိုတော့တယ် ဒီအတိုင်းဆက်ထိုင်နေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေတဲ့လေဆိပ်ဝန်ထမ်းအမကြီးတစ်ယောက်ကိုမေးတော့မှ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဂိတ်မှားဝင်ပြီးစောင့်နေတာကိုသိရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ကိုယ်လေယာဉ်စီးရမယ့်ဂိတ်ကိုအပြေးသွားကြရပြန်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုလေကြောင်းလိုင်းမှဝန်ထမ်းတွေက လက်မှတ်တွေတောင်းပြီးလေယာဉ်ပေါက်ဝအထိလိုက်ပို့ကြပါတယ် လေယာဉ်ပေါ်ရောက်တော့မှပဲ အရှေ့ ဆုံးခုံတွေရဲ့ နောက်နားကခုံးမှာ စက်ချုပ်ကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုလည်တဆန့်ဆန့်နဲ့မျှော်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ် စက်ချုပ်ရဲ့ အနားကနေကျွန်တော်တို့ထိုင်ခုံတွေရှိရာကိုဖြတ်အသွားမှာ စက်ချုပ်က”ခင်ဗျားတို့ ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ? ကြာလိုက်တာ!”ဆိုတဲ့အမေးကို “နောက်မှပြောပြမယ်”ဆိုပြီး ရယ်ချင်နေတဲ့ပါးစပ်တွေကိုပိတ်ကာ ကိုယ်ထိုင်ရမယ့်ထိုင်ခုံဆီကိုအရောက်သွားပြီးမှ တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်ပြီး အားရပါးရရယ်မိကြတယ် ဘေးထိုင်ခုံကလူတွေကအထူးအဆန်းကြည့်ကြလို့ပေါ့လေ လေယာဉ်ပေါ်မှာပစ္စည်းတွေကိုနေရာချပြီး ခဏအကြာမှလေယာဉ်စထွက်ပါတယ် ပျာလောင်ခတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပြီးသွားပြန်တော့လေယာဉ်ဘီးအရွေ့ နဲ့အတူ လေယာဉ်အပြေးနှန်းမြန်လာပြီးတဲ့နောက်မှ ညှိမ့်ခနဲအထိအတွေနဲူ့ ၀ီကနဲအော်မြည်ပြီး လေပေါ်ကိုထိုးတက်သွားတဲ့အခိုက်မှာလေယာဉ်ပြတင်းပေါက်ကနေ ဖူးလိုက်ရတဲ့ရွှေတိဂုံဘုရားကိုဦးခိုက်ရှိခိုးလိုက်ရင်း အပျော်ခရီးသွားဈေးဝယ်တာနဲ့ မတူတဲ့ခရီမို့ ကိုယ့်အမိတိုင်းပြည်ကိုခွဲခွာရပြီအတွေးတွေနဲ့တူသက်ဆိုင်သူတွေရဲ့ မျက်နှာတွေမျက်ဝန်းထဲမှာတန်းစီပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့ အဝေးရောက်အလွမ်းဆိုတဲ့ခံစားချက်ကအကြိမ်ကြိမ်ရင်ကိုလာရိုက်ခတ်ပြန်တယ်
ဝေ့၀ဲတက်လာတဲ့မျက်ရည်တွေကိုမျက်တောင်နဲ့တဖြတ်ဖြတ်ခတ်ကာဖျောက်ဖျက်ရင်းမျက်လုံးတွေကိုအတန်ကြာမှိတ်ထားလိုက်မိပြန်ပါတယ် ကျောပိုးအိတ်ထဲက ရေးနေကျဒိုင်ယာရီကိုထုတ်ပြီးခံစားရသမျှအဖြစ်အပျက်အားလုံးမှတ်တမ်းတင်နေမိသလို ချစ်သူပေးလိုက်တဲ့ပိတ်ထားလျှက်သားပဲရှိနေသေးတဲ့စာအိတ်လေး မိသားစုဓာတ်ပုံ ချစ်သူဓာတ်ပုံတစ်ခုချင်းစီကြည့်ရင်း ၀မ်းနည်းတဲ့အတွေးနဲ့အတူ သက်ပြင်းကိုခပ်ပြင်းပြင်းချရင်းအာရုံပြောင်းဖို့ လေယာဉ်ပြတင်းပေါက်ကနေအောက်ကိုငုံ့ကြည့်မိပြန်တော့ အမိမြေရဲ့ ရန်ကုန်မြို့  ပေါ်မှာပျံဝဲနေဆဲ သင်္ဘောသားဖြစ်ဖို့ ၃ နှစ်နဲ့ ၇ လတိတိကြာအောင် ရှုံးနိမ့်ချိန်တွေများစွာမှာ ခြေရာထပ်အောင်သွားခဲ့ဖူးတဲ့နေရာတွေ ချစ်သူနဲ့အတူသွားခဲ့ဖူးတဲ့နေရာတွေကိုအထင်သားမြင်နေရတာ ဆိုတော့မျက်ရည်တွေကအတားအဆီးမဲ့စွာနဲ့မျက်ဝန်းထဲဝေ့၀ဲတက်လာခဲ့ပြန်ပါတယ် အော်သံပြားနင်းဘူးတဲ့သင်္ဘောသားစစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ထက် အဝေးရောက်အလွမ်းတွေရင်ဆိုင်ရတာကတော့အရင်စနှင့်နေပြီဆိုတဲ့အသိနဲ့ဝေဒနာတွေကိုဖြေဖျောက်ဖို့ရာ သက်ပြင်းရှည်တစ်ချက်ကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီး မျက်လုံးအစုံကိုမှိတ်ထားလိုက်ပေမယ့် ချစ်သူ့ပုံရိပ်ကအတွေးထဲမှာနေရာယူဆဲ………………….
၃၀.၅.၂၀၁၂... ဘန်ကောက် ည ၇း၄၅
ရန်ကုန်အချိန် ညနေ ၆ နာရီ ၁၅ မိနစ် ထိုင်းနိုင်ငံအချိန် ည ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ် ကျွန်တော်တို့စီးလာတဲ့လေယာဉ် ဘန်ကောက်လေဆိပ်ကိုရောက်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သုံးယောက် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ကိုလံဘိုလေဆိပ်ကိုလေယာဉ်ဆက်စီးရမှာပါ ထိုင်းနိုင်ငံအချိန် ၈ နာရီ ၄၅ မိနစ်ထွက်မယ့် သီရိလင်္ကာလေကြောင်းလိုင်းကလေယာဉ်ကိုဆက်စီးရမှာမို့ ရတဲ့အချိန်နည်းတာကြောင့် ကိုယ်စီးရမယ့်လေယာဉ်ဂိတ်ရှိရာကိုအပြေးသွားကြရပါတယ် သံပြားမနင်းဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့အေဘီနှစ်ယောက်တည်းသာဆိုသွားဖူးလာဖူးမရှိတာမို့တော်တော်ကိုပျာယာခတ်နေမှာသေချာပါတယ် ဘန်ကောက်လေဆိပ်ကလည်းအရမ်းကိုကျယ်ဝန်းပါတယ် စက်ချုပ်တစ်ယောက်လုံးပါလို့တော်သေးတာပေါ့
ဒီလိုနဲ့ကိုယ်စီးရမယ့်လေယာဉ်ဂိတ်အရောက်မှာ စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုသုံးယောက်သားလျှောလျှောရူရူဖြတ်ပြီးမှ ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကိုဖုန်းဆက်ဖို့သတိရတာကြောင့် သုံးယောက်သားစစ်ဆေးရေးဂိတ်အပြင်ကိုပြန်ထွက် အင်တာနက်သုံးဖို့ကလည်းအချိန်မရတာနဲ့ ဒေါ်လာနဲ့ဘတ်ငွေလဲကာ ရန်ကန်ုကိုဖုန်းဆက်ပါတယ် အရင်ဆုံးမိဘတွေဆီဖုန်းဆက် အဆင်ပြေပြေချောချောမွေ့မွေ့ရောက်ကြောင်းပေါ့လေ နောက်တစ်ခါဆက်တာကချစ်ရသူဆီပေါ့ တစ်ဖက်ကဖုန်းကနေပြန်ထူးသံအကြားမှာတော့ ရင်ထဲကခံစားချက်တစ်ခုနဲ့အတူ စကားပြန်ပြောနေတဲ့ ကိုယ်အသံကိုပုံမှန်အသံဖြစ်အောင်ထိန်းရင်း စကားပြောရပါတယ် တစ်ဖက်ကချစ်ရသူရဲ့ အသံကလည်းဝမ်းနည်းလို့တုန်ရင်နေတဲ့အသံပဲလို့သိလိုက်တယ် တစ်ကယ်ချစ်တဲ့သူတွေမှာ ခံစားချက်ချင်းထပ်တူကျတယ်ဆိုတာမျိုးထင်ပါရဲ့  ခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်ကိုပါးစပ်ကထွက်လာဖို့ကလည်းတော်တော်ကိုခက်ခဲတယ်လေ အင်တာနက်သုံဖို့အချိန်မရတဲ့အကြောင်း ချောချောမွေ့မွေ့ရောက်ကြောင်းလေးသာပြောလို့ ဖုန်းကဒ်ကုန်သွားတဲ့မိနစ်ပိုင်းလေးကိုစောင့်နေလိုက် မိပါတယ် ဆက်ပြောနေရင် မျက်ရည်တွေဝိုင်းလာတော့မယ်ဆိုတာသေချာနေလို့ပါ ဒီလိုပါပဲအလွမ်းဆိုတာတောင်မှ အဝေးရောက်ပြီးလွမ်းရတဲ့အလွမ်းကိုပီပီပြင်ပြင်ကိုခံစားဖူးခဲ့ရပါတယ်
ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုတစ်ခေါက်ပြန်အဖြတ်မှာတော့ သင်္ဘောပေါ်ကလူတွေအတွက်လူကြုံပေးလိုက်တဲ့ အစားအသောက်တွေထဲကတော်တော်များများအသိမ်းခံလိုက်ရပါတယ် ဘယ်လိုပဲတောင်းပန်တောင်းပန် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ကလူတွေက ယူဆောင်ခွင့်မပြုပါဘူး ကိုယ်နဲ့မတွေ့ဖူးသေးတဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေအတွက်ကိုယ့်မိသားစုကပေးလိုက်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုတော့မျှော်နေကြမှာပဲလို့တွေးရင်း အရမ်းကိုအားနာသွားမိပါတယ် ကျွန်တော်တို့ပထမအခေါက်ဖြတ်တုန်းကဒီပစ္စည်းတွေအတွက်လျှောလျှာရှူ ရှူအဆင်ပြေခဲ့ပေမယ့် အခုတစ်ခေါက်ကတော့ဝန်ထမ်းတွေချိန်းသွားတာကြောင့်လည်းပါပါတယ် အဓိကတရားခံကတော့ကျွန်တော်ပေါ့လေ ဖုန်းဆက်ချင်တဲ့စိတ်လေးကြောင့် တစ်ယောက်တည်းသွားရင်လည်းဘယ်နေရာဘာရှိမှန်းမသိတော့ အဖော်နှစ်ယောက်ပါအဖော်လိုက်ပေးရတဲ့အခြေအနေကြောင့်ပါပဲ နောက်အလုပ်တွေကျရင်ဆင်ခြင်ရမယ့်အရာတစ်ခုလို့နောင်တရရုံကလွဲလို့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပါဘူး အတူပါလာတဲ့စက်ချုပ်ကလည်း “ဒါမျိုးကဖြစ်တတ်ပါတယ်”လို့နှစ်သိမ့်ပါတယ် ဒါသင်္ဘောသားဘ၀ရဲ့ ပထမဆုံးမှတ်သားစရာအတွေ့အကြုံပါပဲ
ဟူး……………သက်ပြင်းရှည်တစ်ချက်ကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီး စိတ်ထဲကရေရွတ်လိုက်တယ် အော် သံပြားမနင်းဘူးတဲ့သင်္ဘောသားလူသစ်တစ်ယောက်ရဲ့  အချစ် အချစ်ဆိုတာလေ
လွမ်းတဲ့စိတ်ကြောင့် ဖုန်းလေးတစ်ချက်ဆက်ဖို့ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်လေးဖြစ်သွားတယ်
သက်ဆိုင်သူမင်းသိရဲ့ လား? လို့……………………..
Shared by - Aung Koko